Alika sy adin-tsakafo | Tontolo alika
Misy fehezan-teny malaza milaza amintsika fa isika no mihinana. Raha tena misy izany dia tokony apetratsika amin'ny tenantsika ity fanontaniana ity aorian'ny fividianana ny sakaosy sakaosanao ao amin'ny supermarket mahazatra ary mividy ny marika mora indrindra. Raha kitapo 10 kg no vidintsika 20 eu, dia tokony hanontany tena farafaharatsiny isika, ahoana no ahafahan'ny vidin'ny sakafon'ny alikako lafo vidy ary raha mifanaraka aminy izany.
Androany aho dia handinika ny zava-misy eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny sakafo alika, ny vatan'izy ireo, ny kalitaony, inona ny sakafo mety indrindra ho an'ny alika na ny fiantraikan'izany amin'ny alika mihinana sakafo mora vidy toy izany. Ary ny valiny ampanantenaiko dia hahagaga raha tsy hiteny afa-tsy izay. Avelako amin'ity lahatsoratra ity ianao, Alika sy adin-tsakafo.
1 Manome alika ny alikanay.
1.1 Ny andraikitsika.
2 Ny alika dia biby mpiompy.
2.1 Mihinana toy ny karnavora.
3 Te ho falifaly aho, mila orinasa mpamokatra sakafo.
3.1 Inona no tena mandray ny sakafo?
4.1 Andao hiverina.
Manome alika ny alikanay.
olona mirona amin'ny alikantsika isika amin'ny alàlan'ny fanaingoana azy ireo. Tsy zava-baovao izany. Ary tsy ny olombelona no manao azy io amin'ny alika sy saka ihany, fa kosa hoe mazàna ataontsika amin'ny zavatra na toerana. Antsoina hoe Anthropomorphism io, ary io no iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fihenjanana amin'ny biby, amin'ny ambaratonga tsy azontsika an-tsaina. Ary betsaka ny olona tsy mieritreritra an'izany.
Isan'andro dia mila mifanehatra amin'ny olona amin'ny asako aho izay mino fa amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ilay alika dia takatry ny alika izy ireo. Sarotra ny mampahafantatra azy ireo fa tsy hoe tsy mahatakatra tsara ny hafatra ampitainy amin'izy ireo izy ireo, fa afaka manakorontana sy manelingelina azy ireo kosa, manakana azy ireo.
Ary inona no tsy mety amin'ny fandokoana ny volon'alika, mametraka palitao sy satroka aminy, na mamela azy hipetraka eo amin'ny farafara?
Mila ny fitiavan'ny fianakavian'olombelona ny alika, satria biby miaina sy mivezivezy amin'ny omby, ny fifandraisana ara-batana, ny fanekena ara-tsosialy, na ny fombafomban'io andiany io no mampiavaka azy ireo. Ny alika dia mila mahatsapa ho voahaja, tiana, azo antoka ao anaty tranony.
Mazava fa isika, amin'ny maha tompon'andraikitra amin'ny alika misy antsika, dia maniry ny hahatsapan'ilay alika araka ny efa nofaritako tao amin'ny fehintsoratra teo aloha, tia, ekena ary hajaina, ary ny fomba anehoantsika azy dia olona 100%, mividy zavatra , manome ny fihinanam-bilona, ​​manao azy ho tsara tarehy miaraka amin'ny akanjo sy ny loko izay tsy azy, rehefa tsy tsapantsika fa ny alika, amin'ny alika, ny hany tadiaviny dia ny fifandraisan'ny fianakaviany. Matetika ny zanak'olombelona dia manao izany ho famantarana fa miahy ny fiadanan'ny alikany izy na izany aza. ity karazana fitsaboana ny biby ity dia mampihena ny sainy bebe kokoa noho ny zavatra hafa noho ny antony maro samihafa.
Ny voalohany dia izay amin'ny fanaovan'olombelona izany, mirona hampitsahatra ny famerana fetra isika, na inona na inona psikolojia kaninina, ary avy eo mampiasa fomba faneriterena ao anatin'ny fanitsiana izay ataontsika amin'ny fihetsik'izy ireo, izay voamarika amin'ity tranga ity amin'ny fitsaboana omentsika azy ireo.
Tsy ratsy ny mitondra ny alika toy ny olona ao amin'ny fianakavianao, raha mbola tsy midika izany fa tsy manome fanabeazana sahaza azy ho an'ny alika izay miaina miaraka amin'ny fianakavian'olombelona, ​​ao amin'ny tranon'olombelona, ary amin'ny fiarahamonina misy ny olombelona. Ho an'ity dia tsy maintsy ampiakarintsika amin'ny lalàna sy fetrany izay manampy azy hahazo aina ary miaraka amin'izay hahatonga ny olona rehetra hahazo aina amin'izany. Ary midika izany fa tsy manimba ny alika, mamela azy hanao izay tiany ary manala tsiny azy noho ny fitondran-tenany, hanamarina izany any aoriana any alohan'ny tsy fahaizany manao zavatra. Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, in Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina ateraky ny olombelona ary ny famaranana azy manaraka ao amin'ny Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina mahatonga ny olombelona II, Miresaka an'io lohahevitra io amin'ny fomba misimisy kokoa aho.
Olana iray hafa koa tokony hodinihina dia rehefa miakanjo na mandoko izy ireo, Azontsika atao ny manova ny fihetsiky ny alikantsika ary mampifangaro azy, ary koa ireo mpikambana hafa ao amin'ny karazany, izay mety hiteraka toe-javatra tsy ilaina.
Fomba iray hafa tokony hampiasantsika olombelona ny alikantsika dia avy amin'ny sakafony. Ary ity no tena matotra.
Iray amin'ireo namako akaiky indrindra, ndao atao hoe Ana izy, Mpihinan-kena izy io. Manana traikefa betsaka amin'ny alika i Ana, satria efa nitoetra tao amin'ny trano fialofana nandritra ny taona maro, nitantana ny fikarakarana sy ny hafa, ary ankoatry ny fianarana fitsaboana veterinera. Izy dia olona iray hoheveriko ho manana traikefa be amin'ny alika. Na izany aza, lIanao dia efa naniry ny hametraka ny alikanao amin'ny sakafo mifototra amin'ny zavamaniry nandritra ny taona maro Momo. Ianao dia efa nanandrana ny zava-drehetra, na dia mitady ny anaran'ny marika aza miorina amin'ny zavamaniry fotsiny, na vita amin'ny lafarinina. Mihevitra izy fa manao ny tsara, nanomboka mino fa ny marina sakafo ny alika izy io dia afaka miorina amin'ny gliosida sy tavy proteinina ary legioma toa azy, manadino zavatra iray tena ilaina amin'ny famahanana marina ny alikanao. Ny alika dia mpihetsiketsika.
Ary zava-misy io.
Ny alika dia biby mpiompy.
Ary tsy hoe milaza izany aho. Izany dia noho ny antony maro. Hatramin'izao dia nino fa ny alika dia nifindra lavitra ary lavitra ny razambeny amboadia, na izany aza Smithsonian Institute tamin'ny fanadihadiana vao haingana dia namintina fa ny alika sy ny amboadia dia 99% mitovy amin'ny haavon'ny genetika. Betsaka loatra, noho izy ireo nanasokajy ny alika ho karazana iray, avy Canis Familiaris mankany Canis Lupus Familiaris.
Alika dia mpiompy noho ny antony maro amin'ny sehatra ara-batana:
Ny alika dia tsy mamokatra amylase. The amylase es anzima iray izay eo am-bavan'ny ankamaroan'ny ahitra sy omnivora ilaina hamotehana ireo gliosida misy amin'ny sakafony. Mandinika ny sakafony betsaka izy ireo, mandrora, ary ao amin'io rora io no amylase. NY karnavora TSY mamokatra amylaseTsy mila izany izy ireo satria ny sakafony dia TSY mifototra amin'ny voamadinika na voam-bary. Raha tsy mihinana gliosida ianao Fa maninona no mamokatra amilase?
Fantsom-pandevonan-kanina sy asidra. Ny alika dia manana lalan-dra mandevon-kena, izay midika fa tsy mihoatra ny in-3 ny habeny, ary manana PH 1-2. Izany dia satria ny henan'ny haza dia mila simbaina. Io koa dia mandevona hena amin'ny toe-javatra ratsy na lo, satria ny alikantsika dia mpandroba ary mpihaza koa.. Etsy ankilany, ny herbivores dia manana lalan-pandevonan-kanina mahatratra hatramin'ny 12 heny noho ny habeny ary miaraka amin'ny PH 5, mety indrindra amin'ny fahaizana mandevona voam-bary sy legioma..
Nify maranitra sy fihetsiky ny valanorano mitsangana. Ny alika dia tsy mihetsika ny vavany toy ny ahitra. Ny herbivores dia manao fihetsiketsehana boribory sy fihodinan'ny valanoranony mba hahafahany mivezivezy sy manentsina ireo voam-bary sy legioma noforonin'ny sakafony. Mihetsiketsika fotsiny ny vavan'ny alika satria tsy mitsako, tsy mahazo, miforitra ary mitelina. Tsotra toa izany.
Araka ny filazan'ny mpitsabo aretin-kaninina lehibe, Carlos Alberto Gutierrez, ao amin'ny bokiny "Ny fahamarinana mahamenatra momba ny sakafon'ny alika":
Ny famahanana karibonetra karnivora tsy tapaka dia manery ny pancreas hamokatra insuline bebe kokoa (ilay hormonina izay mampiditra siramamy ao anaty sela). Ny pancreas an'ny karnavora dia miasa kely kokoa noho ny omnivores sy herbivores satria tsy ampiasaina amin'ny gliosida maro be.
Ity famokarana insuline be loatra ity dia misy fiatraikany ara-batana marobe amin'ny alika, anisan'izany ny hypoglycemia na ny siramamy ambany amin'ny rà.
Mazava izao fa ny alika dia mpihetsiketsika ary maninona no karnavora, andao hanontany tena isika, Inona no nohanin'ny karnavora?
Mihinana toy ny karnavora.
Raha vantany vao namaritra karnavora isika dia andao jerena izay sy ny antony. Mitanisa indray Carlos Alberto Gutierrez:
Indrindra ny haza, ny vorona, ny bitro, ny faty miha simba, ary rehefa mihaza omby izy ireo, dia misy renindry na biby goavambe, maratra matetika na namela ny vondrona noho ny antony maro samihafa, aretina, fahanterana ...
Alika maoderina amin'ny firazanana rehetra, ao anatin'izany ny anao, dia vitsy taona vitsy teto ambonin'ny tany, namboarin'olona izy ireo. Mba hanomezana hevitra anao, ireo karazany ireo dia zato taona vitsivitsy ary avy amin'ireo alika dia izay nipoitra niaraka tamin'ny lehilahy maoderina tokony ho 80,000 XNUMX taona lasa izay. Ireto alika bibidia ireto kosa dia avy amin'ny amboadia amn-tapitrisany taona.
Ny fanovana evolisiona dia tsy mitranga ao anatin'ny taona vitsivitsy, fa an'arivony maro. Araka ny nolazaiko anao, ny alikanao dia niaraka taminay nandritra ny taonjato vitsivitsy. Tsy nisy niova ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy sy ny teo alohany: ny alika dia sy ny amboadia, afa-tsy ny bika aman'endriny.
Ny alika dia mihinana proteinina biby matetika. Alao sary an-tsaina vetivety hoe a Ny proteinina dia toy ny rojo, ary ny rohy izay mamorona azy dia antsoina asidra amine. Ireo asidra amine ireo dia tsy mitovy amin'ny proteinina amin'ny zavamaniry toy ny an'ny biby.
Mila asidra amine 22 ilaina amin'ny alika ny alika. Izy tenany, amin'ny alàlan'ny atiny, dia mahavita mamokatra 12 amin'ireo asidra amine ireo, na izany aza ny 10 amin'izy ireo, tsy maintsy mahazo azy ireo amin'ny sakafonao ianao. Ary tsy ireo asidra amine ireo, toa taurine, lysine, arginine, na threonine, dia tsy hita ao amin'ny rojom-asidra amine an'ny proteinina. Noho izany, eto dia hitantsika mazava fa mila hena, trondro na atody ny alikantsika mba hahazoany izay hiainany.
Saingy, inona no fihinanan'ny alika? ... eto no manomboka ny tantara.
Te ho falifaly aho, mila orinasa mpamokatra sakafo.
Ny ankamaroan'ny sakafo dia misy avy amin'ny gliosida avo lenta avy amin'ny voamaina sy serealy mora vidy, ary koa vokatra azo avy amin'ny indostrian'ny sakafon'olombelona. Eto Espana dia misy lalàna mifehy ny sakafo roa, ny iray mihatra amin'ny sakafon'olombelona ary ny iray hafa mihatra amin'ny sakafon'ny biby. Ny ankamaroan'ny orinasa mpamokatra fahana dia orinasa lehibe maro an'isa, izay, mba hananana ny ankamaroan'ny loharanon-karenan'ny orinasan'izy ireo, dia manova ny fako avy amin'ny ozin-tsolika ho volamena, amin'ny alàlan'ireo, mamelona alika sy saka izany dia amin'ny fampielezan-kevitra ara-barotra mety, dia manome anay hatramin'ny 90 eu ny sakafo maina 15 kilao amin'ny baolina ho an'ny biby fiompinay. Averiko indray, avadika ho volamena izy ireo.
Inona no tena mandray ny sakafo?
Araka ny Eva martin, ao amin'ny lahatsoratranao, Sakafo ara-pahasalamana ho an'ny biby fiompinay? avy amin'ny pejinao, Alimentacioncanina.com:
Ny proteinina amin'ny sakafo maina (feed) dia avy amin'ny loharano isan-karazany. Rehefa novonoina ny omby, ny kisoa, ny akoho, ny zanak'ondry ary ny biby hafa, dia notapahina avy tao anaty fatana ny hozatra hohanin'ny olombelona, ​​miaraka amin'ireo taova vitsivitsy izay tian'ny olona hihinana, toy ny lela sy ny katsaka.
Ny kalitaon'ny sakafo ateraky ny vokatra, sakafo ary ny fandevonan-kanina azy dia afaka miovaova arakaraka ny andiany. James Morris sy Rogers Quinton, avy amin'ny Oniversiten'i California ao amin'ny Davis Veterinary School, dia nilaza fa, "ny sakafom-pisakafoanana ho an'ny biby fiompy" dia vokatra ateraky ny indostrian'ny hena, akoho amam-borona ary trondro, izay mety misy fiovana isan-karazany amin'ny fitambaran'ny otrikaina. Ny fangatahana ny fanjarian-tsakafo ara-tsakafo sakafon'ny biby fiompy mifototra amin'ny "Profiles" an'ny Fikambanana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso ankehitriny (AAFCO) dia tsy manome antoka ny fahaizan-tsakafo, raha tsy rehefa voadinika ireo akora ary ampidirina ny soatoavin'ny bioavailability.
Midika mazava izany fa tsy zava-dehibe fotsiny ny alika manana ny proteinina takin'ny sakafo, fa koa io proteinina io dia tsy maintsy manana kalitao iray hahazoana fahavelomana tsara. Ny ohatra manome antsika ny White Book an'ny marika Orijen, avy amin'ny Champion Foods, Hitako fa tena fanoharana izany:
Andao lazaina fa manana kiraro hoditra taloha isika… ny sasany menaka maotera efa nampiasaina… sy ny sotrokely famarana. Ankehitriny, torotorointsika izy ireo ... afangarointsika izy rehetra ... ary alefantsika amin'ny fitsapana any amin'ny laboratoara izany ... mba hamakafaka.
Ity poti-pako ity dia misy ...
Raha mijery ireo "sary mitanjaka" fotsiny ianao ... ny tarehimarika dia mahatonga ity fangaro tsy mendrika ity ho tsara lavitra ... raha ny tena izy, tsara toy ny sakafo alika misy kalitao ihany. Tsy tena zavatra tianao hamahana ny alikanao izany. Misy fanontaniana momba ny fomba hamahan'izy ireo anao mora foana?
Ny kalitaon'ny loharano azo avy amin'ny proteinina dia manamarika singa lehibe iray hafa amin'ny fihinan'ny alika, ny fandevonan-kanina azy. araka Taratasy Fotsy Tompon'ny Sakafo:
Ny fandevonan-kanina ny proteinina dia fepetra lehibe kalitao.
Inona moa no tombontsoa azo avy amin'ny sakafo misy proteinina avo lenta raha tsy mora levonina?
Ny proteinina hena no safidy tsara indrindra - mora levona izy ireo ary misy asidra amine ilaina ho an'ny alika sy saka.
Mba hahatakarana bebe kokoa ny fandevonan-kanina proteinina, zava-dehibe ny manamarika fa ny fandevonan-kanina dia ny fizotran'ny sakafo tsikelikely ho singa kely ampy handalo ny rindrin'ny tsinay sy ny lalan-dra.
• Ny sakafo misy fihinana proteinina be dia be izay azo zaraina ho singa kely kokoa, mora voataona mora kokoa sy haingana kokoa noho ny sasany.
• Ny tsiranoka proteinina izay mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny asidra amine sy ny fandevonan-kanina avo lenta dia avy amin'ny loharanom-biby hatrany.
• Ao amin'ny rafi-pandevonan-kanina fohy an'ny saka sy alika, ny proteinina amin'ny zavamaniry dia kely kokoa ny fandevonan-kanina noho ny proteinina amin'ny hena.
• Ny legioma mampihena trypsin avo lenta dia mety miteraka fihenan'ny proteinina sy ny asidra amine (hatramin'ny 50%) amin'ny voalavo sy kisoa.
Toy izany koa, ny fisian'ny tannine avo lenta amin'ny serealy, toy ny sorghum, ary ny legioma, dia mety hampihena be ny proteinina sy ny asidra amine (hatramin'ny 23%) amin'ny voalavo, akoho amam-borona ary kisoa.
Tokony hotadidintsika fa misy daholo indostrian'ny sakafo iray ao ambadiky ny foto-kevitry ny sakafo alika, indostria izay mamindra an'arivony tapitrisa euro isan-taona manerantany. Ity indostria ity dia milaza amintsika fa ny sakafom-pisakafoanana alika dia mifototra amin'ny serealy sy legioma noho ny antony tsotra: mora kokoa ny manafangaro ny sakafo amin'ny baolina fahanana ho an'ny alikantsika amin'ny voam-bary, voamadinika ary legioma noho ny hena sy trondro. Midika izany fa ny sakafon'alikao dia mifototra amin'ny sakafo zara raha manome sakafo azy, noho ny fifanarahana indostrialy fotsiny izay, tamin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra ara-barotra tsara, dia resy lahatra isika fa io no tsara indrindra ho azy ireo.
Ny mifanohitra tanteraka amin'izany no izy. Heveriko = Poizina ho an'ny alikantsika.
Misy fehin-kevitra roa azontsika tsoahina amin'ity fanadihadiana fohy nefa mafy ity:
Ny Alika dia Karnavora ary mila proteinina biby.
Heveriko fa amin'ny bal (na kapoaka hena) dia tsy misy proteinina sy tavy izay manampy anao hahazo ireo asidra amine 10 ilaina amin'ny sakafo toy ny arginine, lysine na tryptophan.
Ny alika dia mahazo antsika ny zava-drehetra amin'ity fiainana ity amintsika. Raha mivoaka izy, dia satria avoakantsika izy, raha misotro izy dia satria manome azy rano isika, ary raha mihinana izy dia satria isika manome sakafo azy. Raha misy tsy fahampiana amin'ny sakafonao, isika no tompon'andraikitra amin'ny fanitsiana azy, satria tsy afaka izy. Na izany aza, izy no mijaly amin'izany.
Rehefa mahatsikaritra ny alika fa tsy manome sakafo azy ny sakafo dia misy zavatra tsy ampy, tsy afaka manao na inona na inona samirery, satria tsy azony atao ny mihaza, dia manomboka miady saina izy, izay amin'ny voalohany dia hiseho ara-potoana, mitarika azy hitazona ilay toe-javatra na hiharatsy kokoa (it maniry tsy misy izay ilaina hitombo amin'ny sakafonao na mandany angovo bebe kokoa noho izay raisinao) mba ho tonga loharanon'ny fihenjanana lehibe, izay ahafahana mipoitra ny karazana fitondran-tena mampihetsi-po sy ny Distres, izay mety hitarika amin'ny fomba maro, avy amin'ny aretina mifandraika amin'ny rafitra psychoneuroimmune anao, na ny fizarana fisarahana amin'ny fianakaviany aza, tsy azon'izy ireo izay nanjo ilay alika.
Ny fehezan'ity tranga ity dia tsotra hita amin'ny fomba fijery ara-batana ny biokimia an'ny anatomin'ilay biby: Raha mila proteinina niavian'ny biby ny alika, ohatra, tryptophan, izay asidra amine tompon'andraikitra amin'ny famokarana serotonin, izay tena zava-dehibe ho an'ny biby sisa tavela satria izy io no mpamporisika ny torimaso, ary tsy mahazo avy amin'ny sakafony no hanasongadinana azy. Ao anatin'ny andiana lahatsoratra teo aloha, mijery lalina ny adin-tsaina ao amin'ny alikanay aho, manomboka eo am-baravarana Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Adin-tsaina ary miafara amin'ny Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina mahatonga ny olombelona II. Amin'ity andiana lahatsoratra ity dia ho azonao ny fiantraikan'ny fihenjanana amin'ny alikao.
Ny alika dia biby mpihinana hena, izay na dia tafiditra tanteraka amin'ny fiarahamonina olombelona aza dia tsy omnivora toa antsika. Mahatonga izany Ny sakafo mifototra amin'ny sakafo indostrialy azo avy amin'ny akora tsy dia misy kalitao (ambany loatra ka tsy hihinanantsika azy io) dia loharanon'ny olana tsy mety ritra ho an'ny biby fiompintsika, manomboka amin'ny aretina ara-batana, hatramin'ny fihenan-tsasatra manodidina ny sakafo, ka miteraka alika miaraka amin'ny fihetsika sy fitondran-tena tsy terena izay tsy azontsika na tsy haintsika.
Zava-dehibe ny fanovana ny sakafon'ireo alikantsika ary hanontany tena ianao toa an'i Antonio? ...
Eny, hilaza aminao i Antonio.
Aza adino ny manaraka ny torolàlana famahanana alika World World sy ny boky momba azy ireo.
Ary holazaiko aminao ihany koa ny tantaran'ny fiaviany sy ny fivoaran'ny sakafo alika indostrialy miorina amin'ny vokatra ateraky ny indostrian'ny sakafo olombelona. Ka tezitra ianao ary fantatrao ny antony.
Miarahaba ary misaotra betsaka anao namaky ahy. Karakarao ny alikanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Alika sy adin-tsakafo
Ny marina dia lasa adala aho amin'izany rehetra izany. Tena voafitaka isika raha ny famahanana ny alikantsika no resahina. Tsy fantatro izany rehetra izany. Misaotra anao!!!
Maria caicedo dia hoy izy:
Ny zokiko dia mandany an'i Barf ary tsy nanana olana amin'ny fandevonan-kanina na dia indraindray aza dia nangataka ny hanamorana ny sakafony amin'ny karazan-kena hafa, tsiro hafa fa tsy misy hafa.
Valiny tamin'i Maria Caicedo
Mihomehy ve ny alika?